အနန္တစင်္ကြာဝဠာ၊ အနန္တသတ္တ၀ါတို့…. |
ဘလော့ဒေးအလွန်နှင့် မြ၏ တောင်တောင်အီအီ ရောက်မိရောက်ရာများ →
Posted on August 8, 2014 by mamyathway
Number of View: 13425
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း။)
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ကျင်းပသည့် ဒသမအကြိမ်မြောက်၊ ရွှေအမြုတေစာပေဆုပေးပွဲ၌
ရွှေအမြုတေ ၀တ္တုရှည် စာပေဆုရရှိခဲ့သည်။
“ ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ နေ၀ ဒေဿ န္တဘီသနံ
ယဥှိ စေ၀ါနယုဉ္ဖန္တော ရတ္တိန္ဒိဝ’မတန္ဒိတော”
မေတ္တသုတ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇာယ်သံများကြောင့် မေသက်တစ်ယောက် လက်ထဲက လုပ်လက်စ စာရွက်စာတမ်းများ ကို ဘေးခဏချထားပြီး၊ သူ့ရုံးခန်းထဲမှ အရှေ့ဝရန်တာရှိရာဆီသို့ အပြေးထွက်လာခဲ့၏။ သူ့ကဲ့သို့ အပြေးထွက်လာ၍ ၀ရန်တာဆီ သွားနေသူများကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ၀ရန်တာရောက်တော့ ရုံးက ၀န်ထမ်းအတော်များများသာမက၊ ရုံးတွင် အလုပ်ကိစ္စဖြင့်ရောက်နေ သည့် ဧည့်သည်များဖြင့်ပါ ပြည့်၍နေ၏။ မေသက်လည်း အများကြားတွင် တိုးဝှေ့၍ အသံလာရာ လမ်းမကြီးဆီသိုို့ ကြည့်လိုက်မိ၏။ အသံများသည် ရုံးရှေ့ရှိ သက်တမ်းရင့်ကုက္ကိုပင်ကြီး၏ စိမ်းမြမြအရွက်အခက်များ အကြား ညီညာဖျဖျ စီးမျောလာသည့် ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်များ ဆီမှ ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းပိုမို ပီပြင်သွားစေရန်အတွက် မေသက်က ခြေဖျားလေးကို ထောက်၍ ကြည့်လိုက်မိ၏။
ကမ်းနားလမ်းဘက်မှ အရွယ်စုံသံဃာတော်များ တညီတညာတည်း ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇာယ် ရင်း မေသက်၏ အလုပ်တည်ရှိရာ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမကြီးဆီသို့ ချိုးကွေ့လာ၏။ ဘေးမှ ကပ်ပါလာသည့် လူအုပ်နှင့်ပေါင်းလိုက်မည် ဆိုလျှင် မနည်းမနောပေ။
“ သန္တုဿ ကောစ သုဘရောစ… အပ္ပကိစ္စော စ သလ္လဟုက၀ုတ္တိ…”
နှုတ်မှလိုက်ပါ၍ ဖွဖွရွတ်မိရင်းက မေသက် အလိုလို လက်အုပ်ချီမိသွားသည်။ မေသက် ကဲ့သို့ ၀ရန်တာရှိ အခြားဝန်ထမ်းများလည်း အလားတူပင်။ သံဃာတော်များ၏ ညီညာဖျဖျ မေတ္တသုတ် ရွတ်ဖတ်နေသံများက ကြက်သီးမွေးညှင်း တဖြန်းဖြန်းထလာစေ၏။ ပိတောက်ပင်ကြီးပေါ်မှ ကျီးများက ရုတ်တရက် ချိန်ကိုက်ထပြိုသည်။ သြော်… သံဃာတော်များပင် လမ်းမထက် ဆင်းလာရချေပြီ။ မတည်မငြိမ်အခြေအနေတွေက ဒီရက်ပိုင်းမှ ရုတ်ရုတ်သည်းသည်း မို့ အားလုံး၏နှုတ်ဖျားမှသည်အကြောင်းပဲ ပြောဖြစ်နေကြသည်။ မေသက်တို့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တုန်းကကဲ့သို့ ၈၈ အရေးအခင်းကြီးမျိုး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံဖြစ်မှာ ကို မေသက် စိုးရိမ်မိသည်။ ထိုစဉ်အခါက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တစ်ဦးမို့ အများနည်းတူ တတ်နိုင်သမျှ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပါဝင်နိုင်ခဲ့သော်ငြား၊ အခုအချိန်အခါမှာတော့ မေသက်ကို လှုပ်မရအောင် ခိုင်ခိုင်နှောင်တည်း ထားသည့် ကြိုးမျှင်များက မနည်းပေ။ စိတ်ကရှိသည်ဆိုဦး ခန္ဓာကိုယ်က လှုပ်မရပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသည့် လူမမယ်သားဖြစ်သူ ဇွဲ၏ မိခင်ဘ၀၊ အသက် ခွန်နှဆယ်ကျော် ဖခင်ကြီးကို စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်နှင့်ဝတ္တရား စသည်များက
မေသက်ကို အရင်လို စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါခွင့် မပေးတော့ပေ။
“ မမမေသက်… ဆရာ့ဆီက ဖုန်းလာနေတယ်..”
၀န်ထမ်း ညီမလေးတစ်ဦးက လာပြောသဖြင့် မေသက် အလုပ်စားပွဲရှိရာဆီသို့ ပြန်ပြေး ရ၏။
“ အခြေအနေက ဘာမှန်းပြောလို့မရဘူး ဒေါ်မေသက်၊ လမ်းတွေ နေရာတော်တော်များများမှာ ပိတ်ထားတယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေ အိမ်ပြန်ရခက်နေလိမ့်မယ်… ဒီတော့ အားလုံးကို ရုံးစောဆင်းခိုင်းလိုက်တော့…၊ အခန့်မသင့်လို ရုံးတွေပြန်တက်ဖို့ အခြေအနေမပေးခဲ့ရင် စိတ်ချရအောင် မီးခံသေတ္တာထဲက ငွေတွေပါ ဒေါ်မေသက်အိမ်ကို အကုန် သိမ်းသွား၊ အရေးအကြောင်း ငွေလိုရင် ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်မှာလာယူမယ်၊ ရုံးတံခါးတွေ သေချာပိတ်ပြီးမှ ရုံးဆင်းချေ၊ ခင်ဗျားအိမ်ပြန်ရင် ငွေတွေနဲ့အန္တရာယ်များတယ်၊ ဒီဘက်မှာလဲ ကားလမ်းတွေ ပိတ်နေလို့ ရုံးကားကို ပြန်မလွှတ်တော့ဘူး၊ အဲ့ဒီကနေပဲ တက္ကစီငှားပြန်လိုက်ပါ”
တစ်ဘက်ရုံးချူပ်မှာ အမြဲထိုင်တတ်သည့် သူဋ္ဌေးဖြစ်သူမှ မေသက်ကို တရစပ်ညွှန်ကြား၏။ လုပ်သက်ဆယ် နှစ်ကျော် အထွေထွေမန်နေဂျာဘ၀ဖြင့် ရုံးခွဲတွင် သီးသန့်တာဝန်ယူ ထိုင်ခိုင်းထားသည့် မေသက်ကို စိတ်ချစွာဖြင့် သူဋ္ဌေးက မှာကြားနေ၏။ ဖုန်းထဲမှ သူဋ္ဌေး၏အသံက စိုးရိမ်သံလွှမ်းနေ၏။ သူဋ္ဌေးဖုန်းချသွားလျှင် ၀န်ထမ်းအားလုံး အိမ်သို့ အမြန်ပြန်ဖို့နှင့် အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် ပြန်ရောက်ကြောင်း ဖုန်းဆက်သတင်းပြန်ပို့ရန် မှာရသည်။ သို့နှင့် တစ်ရုံးလုံး အိမ်ပြန်ဖို့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ကုန်ကြ၏။ မီးခံသေတ္တာထဲက မြန်မာငွေ လက်ကျန်များ၊ ငွေလာချေထားသည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာအချို့နှင့် အက်ဖ်အီးစီများအားလုံးကို အိတ်တစ်လုံးဖြင့် လုံခြုံအောင် အထပ်ထပ်ထုတ်ပိုးလိုက်၏။ ပိုက်ဆံထုတ်က မေသက်၏ လက်ကိုင်အိတ်နှင့်မဆန့်သည်မို့ အထုတ်လိုက်သာ ရင်ခွင်ထဲပိုက်၍ ပြန်ရပေမည်။ ရုံးမှမထွက်ခွာမီ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ရုံးတံခါးများ သေချာပိတ်မပိတ်ကို သေချာလိုက်စစ်မိ၏။ သူဋ္ဌေးပြောသကဲ့သို့ ရက်ရှည်ရုံးမတက် ရသည်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဟု မည်သူပြောနိုင်ပါသနည်း။ အခြေအနေကမကောင်း။ သံဃာတော်များ ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက် မုခ်တွင်ရှိစဉ် အပစ်ခံရသည့်သတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီးကတည်းက ဒီရက်ပိုင်း သတင်းမှန်များရော၊ ကောလာ ဟလသံများပါ ညံစီနေသည်။ စားသောက်ကုန်တွေ ရုတ်ချည်းဈေးထိုးတက်ကုန်ပြီး ဆိုင်တိုင်းမှာ ရက်ရှည် စားသောက်ကုန်များအား ကြိတ်ကြိတ်တိုးဝယ်ယူသူများဖြင့် စည်ကားကုန်၏။
၀န်ထမ်းအားလုံး ပြန်ကုန်ကြပြီ။ မေသက်လည်း ရုံးတံခါးမကြီးကို သော့အထပ်ထပ် ခတ်ပြီး ခြေလှမ်း ခပ်သွက်သွက်ဖြင့် ကားငှားရန် လမ်းမပေါ်လျှောက်လာခဲ့သည်။ ရုံးတော်တော် များများ စောစောဆင်းသွားပုံရသည်။ လမ်းမကြီးတစ်ခုလုံး လူများဖြင့် ရုံးစုရုံးစုရှိနေ၏။ မေသက်၏ အလုပ်က ရန်ကုန်မြို့၊ (ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမကြီး၏) အောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ လက်က နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ညနေငါးနာရီပင် ထိုးတော့မည်။ လူခွဲမရှိသည့် မေသက်တို့၏ အိမ်မှာ ယခုအချိန်ဆိုလျှင် အသက်ခွန်နှစ်ဆယ်အဖေနှင့် မူကြိုအရွယ် သားတစ်ယောက်သာ ရှိနေမည်။ မေသက် ရင်တွေ ပူလာ၏။ ဖြစ်ချင်တော့ လမ်းမကြီးတလျှောက် မည်သည့်အငှားကားမျှ လာသည်ကိုမတွေ့ရ။ မြို့ထဲရှိ အချက်အချာကျသည့် လမ်းမကြီးများကို သက်ဆိုင်ရာက ပိတ်ထားလိုက်လေပြီ။ လူအားလုံးက ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ ကိုယ့်ဇောနှင့်ကိုယ် သုတ်သုတ်လျှောက်နေကြ၏။ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် အထက်မြန်မာပြည်သို့ ခရီးထွက်နေသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အားကိုးတကြီး သတိလိုက်ရမ်ိသည်။ ရင်ခွင်ထဲ ပိုက်ထားရသည့် ပိုက်ဆံထုတ်၏ တာဝန်ကလည်း မေသက်ကို ဖိစီးစေပြန်၏။
မေသက်တို့အိမ်က ပန်းဆိုးတန်းကုန်းတံတားကြီး၏တစ်ဘက်ရှိ မြို့နယ်လေးတွင် တည်ရှိသည်။ မဟာဗန္ဓုလလမ်းဘက် ပန်းဆိုးတမ်းကားမှတ်တိုင်ရောက်တော့ အိမ်ပြန်မည့် လူများဖြင့် တိုးမပေါက်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ မေသက် စဉ်းစားလိုက်၏။ ပန်းဆိုးတန်း လမ်းမကြီးတလျှောက် ကုန်းတံတားကိုဖြတ်၍ ခြေလှမ်းသွက်သွက်လျှောက်မည်ဆိုလျှင် မိနစ်အစိတ်လောက်မျှ လျှောက်ရပေမည်။ တွေဝေနေရမည့်အချိ်န် မဟုတ်။ မေသက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည်။ ကားမရလျှင် လမ်းလျှောက်ပြန်၍ရသည်။ လာမလာမသေချာသည့် ကားနှစ်မှတ် တိုင်ခန့် ခရီးအကွာအဝေးကို စောင့်စီးမနေတာ့ပဲ အိမ်အရောက် လမ်းလျှောက်ပြန်တော့မည်။ မဟုတ်လျှင် ကားစောင့်ယုံမျှဖြင့် မိုးချုပ်သွားနိုင်သည်။ အိမ်မှာ စိတ်ပူစွာ မျှော်နေမည့် မေသက်၏ အဖေနှင့်အတူ သားဖြစ်သူဇွဲ၏မျက်နှာကို မှန်းမြင်ယောင်လိုက်တော့ မေသက်ရင်ထဲ အပူလုံးက ဆောင့်တက်လာပြန်၏။
မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းအလယ်ဘလောက်ဘက်သို့ မေသက် ဦးတည်လိုက်၏။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ဘက်သို့ မချိုးကွေ့မီ ဆူးလေဘုရား မြို့တော်ခန်းမဘက်မှ ဆင်းလာရန် တာစူနေသည့် သံဃာအဖွဲ့လိုက်ကြီးကို ဘွားခနဲ တွေ့လိုက်ရပြန်၏။ မေသက်ရင်တွေ ဒိန်းခနဲ ခုန်လာ၏။ အုံခဲကြည့်နေသူတွေကလည်း မနည်းချေ။ ပိုက်ဆံထုတ်ကို ပိုက်လျှက် ခြေလှမ်းအစုံကို မေသက် သွက်သွက်လှမ်းလိုက်မိသည်။ လမ်းတလျှောက်ကြားလာရ သည်က အမျိုးမျိုး။ သို့သော် မေသက် ဘာကိုမျှ အာရုံမ၀င်စားနိုင်။ လတ်တလော အိမ်အမြန်ပြန်ရောက်ရန်သာ အဓိကဖြစ်သည်။ လမ်းပေါ်တွင် ကားများ မတွေ့ရတော့။ လူများဖြင့်သာရှိ၏။ မေသက်ကဲ့သို့ အိမ်ကို လမ်းလျှောက် ပြန်နိုင်သူများအဖို့ တော်သေးသည်ဟု ဆိုရမည်။ ဤသို့ ကားလမ်းတွေ ပိတ်ထားခံရပုံမျိုးနှင့် ခရီးဝေးပြန်ကြရမည့်သူများ မည်သို့မည်ပုံ အိမ်ပြန်ကြမည်လဲဟု မေသက် တွေးနေမိသည်။
ပန်းဆိုးတမ်းတလျှောက် အနော်ရထာလမ်းကိုကျော်လွန်၍ ပန်းဆိုးတမ်းကုန်း တံတားပေါ်သို့ တက်ရန် လမ်းကူးချိန်တွင်မတော့ ပန်းဆိုးတမ်းအထက်လမ်းမကြီးအပြည့် သံဃာအဖွဲ့လိုက်နှင့်တကွ အတူရှိနေသည့် လူငယ်တော်တော် များများကိုပါ တွေ့လိုက်ရ၏။ လူငယ်များက နဖူးစည်းများ၊ လက်ပတ်များစည်းလျှက်။ လက်ထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံမှန်ဘောင်များ ပွေ့ပိုက်လျှက်။ မေသက်စိတ်ထဲ ရုတ်ချည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀ ၈၈အရေးအခင်းကာလဆီ ရောက်သွားပြန်၏။ တစ်ခဏတွင်းမှာပင် မေသက်စိတ်က ပစ္စုပ္ပန်သို့ ပြန်ကပ်၍ အိမ်မှာ ကျန်နေခဲ့သည့် သားဖြစ်သူနှင့် အဖေအိုဆီ ပြန်ရောက်သွား ၏။ မေသက် ခြေလှမ်းအရှိန်ကို မြှင့်လိုက်သည်။ ပန်းဆိုးတန်းကုန်းတစ်ဘက်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ငါးမိနစ်မျှလျှောက်လိုက်လျှင် မေသက်၏အိမ်သို့ သေချာပေါက်ရောက်ပြီ။ ထိုစဉ် ကုန်းပေါ်သို့ ဦးတည်နေသည့် မေသက်၏ မြင်ကွင်းထဲတွင် တွေ့လိုက်ရသည်က သေနတ်ကိုင်စစ်သားများ။ ထိုသူများက ကုန်းတံတား၏လမ်းမအပြည့် ရင်ဘောင်တန်းလျှက် ပန်းဆိုးတန်းဘက်ဆီသို့ တရွေ့ရွေ့ ဆင်းလာနေကြ၏။ သံဃာတော်များ၏ မေတ္တသုတ်ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဖာယ်သံက ပိုမို ကျယ်လောင်လာ၏။
ထိုစဉ် စူးစူးနင့်နင့်အော်သံနှင့်အတူ မေသက်ရှိနေသည့် လမ်း၏ညာဘက်အခြမ်းမှ သံဃာအဖွဲ့၏ အရှေ့နားတွင် ရှိနေသော လူငယ်များထဲမှ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်သည် ပန်းဆိုးတမ်းကုန်းပေါ်သို့ တဟုန်ထိုးပြေးတက်သွား၏။
“ သေနတ်ကို ကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ဖူး… သတ္တိရှိလို့ လမ်းပေါ်ထွက်လာတာ…”
မချိတင့်ကဲ အော်ဟစ်သံနှင့်အတူ အမှတ်မထင် လွတ်ထွက်သွားသော ထိုမိန်းမပျိုလေး၏ နောက်သို့ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ဟန်တူသော ယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက်က တစ်ဘက်တစ်ချက်မှ အပြေးအလွှားလိုက်ဆွဲ၏။ အော်ဟစ်ကြွေးကြော်သံများ၊ ဆဲဆိုမြည်ကျုးသံများ ညံစီလို့သွား သည်။ မေသက်ကိုယ်တိုင်ပင် သွေးတွေဆူပွက်လာသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ကြက်သီးမွေးညှင်းများ ပင် ထလာရ၏။
“ ဖောက်….ဖောက်…ဖောက် ”
“ ပစ်ပြီ… ပစ်ပြီ… ပစ်တယ်ဟေ့”
အခြေအနေက ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွား၏။ ကုန်းပေါ်မှ သူတို့က သေနတ်ဖြင့် လူအုပ်ထဲ ပစ်လိုက်သည်။ မေသက် ခေါင်းလေးပု၍ ပလက်ဖောင်းပေါ်က မီးစက်နဘေးအကွယ်တွင် ၀ပ်ပြီးထိုင်ချလိုက်သည်။ မီးစက်အကွယ်မှ မေသက် သူတို့ကို သဲသဲကွဲကွဲ မြင်နေရသည်။ သူတို့က တကယ်လုပ်မည့်သူများဟု မေသက် ယုံသည်။ ၈၈အရေးအခင်းတုန်းက ကုန်သွယ်ရေးရှေ့ တွင် ကျောင်းသားများထဲသို့ သူတို့ပစ်ခတ်ချိန် မေသက်တို့သူငယ်ချင်းတသိုက် ကိုယ်လွတ်ရုန်း ပြေးခဲ့ရဖူးသည်။ ခုနကလေးမ၏ ခံစားချက်ကို မေသက် နားလည်န်ိုင်သည်။ သို့သော် ယခုမူ မေသက် သေနတ်မှန်မှာ ကြောက်၏။ မေသက် မသေချင်သေး။ သေ၍ မဖြစ်သေးပေ။ မေသက်မှာ မေသက်၏ဘ၀ဟုပင်ဆိုနိုင်သည့် ဥမမည်စာမမြောက် သားလေး ဇွဲနှင့် စောင့်ရှောက်ရမည့် အဖေအိုကြီး ရှိနေသေးသည်။ မျက်စိဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ မေသက် ၀ပ်ပြီးပုန်းနေသည့် မီးစက်နှင့် တည့်တည့်တွင် တိုက်လှေကားတစ်ခု ရှိနေသည်။ လောလောဆည် ကျည်ဘေးလွတ်ရန် ထိုတိုက်လှေကားပေါ်သို့ ပိုက်ဆံထုတ်လေးပိုက်လျှက် မေသက် အပြေးတက်ခဲ့၏။ မေသက်၏အနောက်မှ ပြေးတက်လာသူတွေလည်း ရှိနေ၏။ သူတို့က မေသက်ကို ကျော်လွန်၍ အပေါ်ထပ်အထိ ဆက်တက်သွား၍ ဤတိုက်တွင် နေထိုင်သူများဟု ယူဆရသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ပထမထပ်လှေကား တစ်ဆစ်ချိုးကွေ့တွင် မေသက် ခြေခေါက်ပြီး ချော်လဲကျသွား၏။ မေသက်၏ကတ္တီပါညှပ် ဖိနပ်လေးတစ်ဘက် ခေါင်ကနေ ပြတ်ထွက်သွားသည်။ ဒူးခေါင်းတွင် ချော်လဲသည့်အရှိန်ဖြင့် ပွန်းပဲ့သွားပုံရသည်။ မတ်တပ်ရပ် လိုက်စဉ် ဒူးက စူးစူးနင့်နင့် နာလာ၏။
“ အစ်မ.. ဒီမှာ…”
ချော်လဲစဉ် လွင့်ထွက်သွားပုံရသည့် မေသက်၏ပိုက်ဆံထုတ်ကို ကောက်ယူပေးသူက အမျိုးသားကြီး တစ်ယောက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟု မေသက် ပြောလိုက်မိ၏။ သူ့ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဦးထုတ်လေး ဆောင်းထားသည်။ သူ့အသွင်အပြင်က ဘာသာခြား တစ်ယောက်ဆိုတာ သိသာနေ၏။
သူက နောက်ကတက်လာသူ သူလို အမျိုးသားတစ်ဦးကို လှမ်းအော်ပြော လိုက်၏။ မေသက်ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲ ဖြစ်သွားရ၏။ လက်ဖျားများအေးလာပြီး လည်ချောင်းထဲ ခြောက်သွေ့လာ ရ၏။ အဖြူအမည်း မသဲကွဲသည့် ယခုအချိန်မျိုးတွင် မိမိကိုယ်မှလွဲ၍ မေသက် မည်သူ့ကိုမျှ မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ရုံးပိုက်ဆံများ တစ်ခုခုကြောင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့မည် ဆိုလျှင် မေသက်တွင် ပြန်လည်အလျော်ပေးနိုင်သည့် အခြေအနေ မရှိပါ။ သို့ဖြင့် ရင်ခွင်ထဲက ပိုက်ဆံထုတ်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် တိုး၍ ပွေ့ထားလိုက်မိသည်။ သို့သော် ထိုသူက မေသက်ကိုကျော်လွန်၍ အပေါ်သို့ လှေကားထစ်များအတိုင်း တက်သွားရင်းက အခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်၏။ ထိုသူ၏ဇနီးဟုယူဆရသူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် တံခါးလာဖွင့်ပေးစဉ် သူတို့ဘာသာစကားဖြင့် အချင်းချင်းပြောရင်း အိမ်ထဲသို့ ၀င်သွားကြ၏။ တံခါးချက် ပိတ်လိုက်သံ ကြားလိုက်ရမှ မေသက် သက်ပြင်းမောကို ဟူးခနဲချလိုက်မိ၏။ ထိုစဉ် ဖောက်ခနဲ သေနတ်သံတစ်တချက် ထပ်မံကြားရပြန်သည်။ ဝေါခနဲ လူသံတွေနဲ့အတူ ကြွေးကြော်သံတွေလည်း ဆူညံသွားပြန်၏။ မေသက်၏နှလုံးခုန်သံများ တဒိန်းဒိန်းမြန်လာပြန်၏။ ပင့်ကူမျှင်များ၊ ဖုန်မှုန့်များဖြင့် မှုန်ဝါးနေသည့် လှေကားထိပ် မှန်ကူကွက်လေးမှတဆင့် လမ်းမသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ အခြေအနေမကောင်း။ လူတွေက လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ပြေးပြေးလွှားလွှား။ မေသက် ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း။
တံခါးပွင့်သံ ကျွီခနဲကြားလိုက်ရသည်နှင့်အတူ စောစောက အခန်းတံခါးပြန်ပွင့် သွား၏။ မေသက် ထိတ်ခနဲ ထပ်ဖြစ်ရပြန်သည်။ ၀တ်ရုံခေါင်းမြီးခြုံထားသည့် စောစောက အမျိုးသမီးပြန်ထွက်လာ၏။ သူ့လက်တစ်ဘက်တွင် သောက်ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်နှင့် ကျန်တစ်ဖက် တွင် တစ်ပတ်နွမ်း ဖိနပ်အပါးလေးတစ်ရံပါလာ၏။ သူကမ်းပေးသည့်သောက်ရေ ကို မေသက် မငြင်းနိုင်တော့ပဲ ယူသောက်မိ၏။ အေးမြသည့်ရေက လည်ချောင်းတလျှောက် ဖြတ်စီးသွားချိန် “ဖိနပ်ပြတ်သွားတယ်မဟုတ်လား.. ဒီဖိနပ်စီးသွားပါ”ဆိုပြီး လက်ထဲမှ ဖိနပ်ကို ကမ်းပေးပြန်၏။ မေသက် အားနာသွားသည်။ သို့သော် မေသက် မငြင်းနိုင်ပါ။ အိမ်အထိ ခြေထောက်ဖိနပ်မပါပဲ ပြန်ရန်မဖြစ်ချေ။ သူ့ဖိနပ်အနွမ်းလေးကို အားနာနာနှင့်ပဲ ယူစီးလိုက်ရသည်။
အိမ်သို့ စိတ်က ပြန်ရောက်သွားသည်နှင့် မေသက် စကားစလိုက်၏။ “ ကျွန်မ အပြင် မြန်မြန်ပြန်ထွက်မှ၊ အိမ်မှာ ကလေးနဲ့ ကျွန်မ အဖေနှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တယ်” ဟု ပြောရင်း လှေကားထစ်အတိုင်း ဆင်းလိုက်တော့ အမျိုးသမီးက အနောက်မှ လိုက်လာရင်း လှေကားအောက်ခတ်ထားသည့် သော့ကို လိုက်ဖွင့်ပေး၏။ “ ပစ်ခတ်နေတုန်း ကျွန်မတို့ အခန်းထဲ ခန၀င်ထိုင်နေပြီး အေးဆေးသွားချိန်မှ ပြန်တာမဟုတ်ဘူး” ဟု သော့ဖွင့်ပေးနေစဉ် ဆိုပြန်၏။ သူ့၏ ၀တ်ရုံအောက်မှ မျက်လုံးအစုံပေါ်တွင် နှစ်လိုဖော်ရွေ ဖွယ်ရာအသွင်ကို မေသက် မြင်ရ၏။ “ကျွန်မ ပြန်မှဖြစ်မှာ..” ဟု ပြောရင်း သူ့၏ဖော်ရွေမှုနှင့်အတူ အကူအညီပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးစကား လေးလေးနက်နက်ပြောမိ၏။
လမ်းမပေါ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့ အခြေအနေက တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် တင်းမာနေဆဲ ရှိသည်။ သွေးစွန်းနေသည့် သံဃာတစ်ပါးကို လူအချို့ ပွေ့ချီသွားတာတွေ့ရ၏။ ပန်းဆိုးတန်းကုန်း အတိုင်း တက်ဖို့က မလွယ်။ ဒီတော့ ၃၅လမ်းထဲက ဖြတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်မှတဆင့် ပန်းဆိုးတန်း ကုန်းကျော်တံတားကို ဘေးလှေကားမှ ပတ်တက်သွား မည်။ ဘူတာကြီးဘက်အခြမ်း လူသွားလမ်းအမိုးအောက်ကနေ ဖြတ်သွားလျှင်လည်း ရသည်ပဲဟု မေသက် စိတ်ပိုင်းဖြတ် လိုက်သည်။ အချိန်က မနည်းတော့။ ငါးနာရီတောင် ခွဲနေချေပြီ။
၃၅လမ်းထဲအ၀င် “အစ်မမေသက်” ဟု ငိုသံပါကြီးဖြင့် လှမ်းခေါ်လိုက်သည့် အသံကြားလိုက်ရ၏။ ကြည့်လိုက်တော့ မာလာ။ မာလာက မေသက်တို့အိမ်မှာ အ၀တ်လျှော် မီးပူတိုက် လာကူလုပ်ပေးနေသည့် တစ်လမ်းကျော်က ကလေးသုံးယောက်မိခင် ဟိန္ဒူ ကုလားမလေး။ မာလာကြည့်ရသည်မှာ ကြောက်ရွံ့စိတ်လွန်ကဲစွာ တုန်ရီနေပြီး၊ ကာချယ် မည်းနက်နေအောင် ဆိုးထားသည့် သူ့မျက်ဝန်းဝိုင်းကြီးအစုံတွင် မျက်ရည်စများ ခိုတွယ်လျှက်ရှိ၏။
“ အိမ်မှာ ကလေးတွေချည်းပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် အစ်မရယ်… သိတဲ့အတိုင်း အငယ်ကောင်လေး ၀မ်းသွားနေတာ ကလဲ အခုထိ မရပ်ချင်သေးဘူး၊ အိမ်ကို ကျွန်မ အရမ်းစိတ်ပူနေတယ်…၊ သူတို့အဖေကလဲ ဒဂုံမြို့သစ်အထိ အလုပ်သွား ဆင်းရတာ၊ ဒီအချိန် ပြန်ရောက်မယ် မထင်ဘူး၊ မြို့ထဲက အိမ်တစ်အိမ်မှာ အ၀တ်လာလျှော်ရင်း အိမ်ကို ဘယ်လိုပြန်ရမယ် မသိဘူး ဖြစ်နေတာ..၊ ကြောက်လဲကြောက်တယ်၊ သွားလဲ မသွားရဲဘူး”
တတွတ်တွတ် ပြောရင်းနဲ့မှ မာလာ့မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များ ယိုစီးကျလာ၏။ ၀တ်ထားသည့်ဆာရီစဖြင့် မျက်ရည်စများကို မာလာက တို့သုတ်လိုက်သည်။ မာလာ အပူက မေသက်၏ အပူပေါ်သို့ ထပ်ဆင့်လာပြန်သည်။ မေသက်ရင်ထဲ နင့်လာရသည်နှင့် အတူ အိမ်အရောက် ရအောင်ကိုပြန်မယ်ဆိုသည့်စိတ်က ခိုင်ခိုင်မာမာဝင်လာ၏။ မေသက် စိတ်ထဲ စောစောက ကြောက်ရွံ့မိသည့်စိတ်များအစား သတ္တိများက တဖန် ပြန်လည်ခိုတွယ် လာ၏။
“ကဲ… မာလာ… ဒီလို ငိုနေလို့မဖြစ်ဘူး၊ တို့အတူတူ အိမ်ရောက်အောင် ပြန်ကြမယ်… နင်မငိုနဲ့… တို့နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်ရောက်ကို ရောက်ရမယ်… လာ…”
မာလာလက်ကို ခပ်တင်းတင်း လှမ်းဆွဲလိုက်၏။ ချွေးစေးများနှင့် မာလာ၏ လက်သေးသေးမည်းမည်းလေးကို မေသက်လက်ထဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်လျှောက် ရင်း နှစ်ယောက်သား ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထိပ်ရောက်လာ၏။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်မှာတော့ လက်နှက် အပြည့်အစုံဖြင့် လုံခြုံရေးများ အပြည့်နေရာယူထားလေပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးပေါ် မည်သူ့ ကိုမျှ ဖြတ်လျှောက်ခွင့် မပေးတော့သဖြင့် မေသက်ရင်ထဲ အမောဆို့သွားရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း မကြီး၏ညာဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အေးရှားပလာဇာ အကျော်လောက်တွင် ဒိုင်းကာ လုံထိန်းများ စီတန်းလျှက် တစ်ဘက်မှလူအုပ်ကြီးအား ၀င်မလာနိုင်အောင် တားနေသည်ကိုတွေ့ ရ၏။
ပန်းဆိုးတန်းကုန်းတံတား၏တစ်ဘက်အဆုံး အောင်ဆန်းကွင်းဘက်တွင် အတော်ကို ပစ်ခတ်နေကြသည်ဆိုပြီး ၃၅လမ်းထိပ်ကလူများ အချင်းချင်းပြောနေသံက နားထဲ တိုးဝင် လာပြန်သည်။ မေသက်နှင့်မာလာတို့နှစ်ယောက်လုံး ဂဏှာမငြိမ်နိုင်တော့ပေ။ မေသက် တွေဝေ စဉ်းစား၍ အချိန်ဖြုန်းမနေနိုင်တော့ပေ။ ရှေ့ခြေလှမ်းဆယ်လှမ်းစာလောက်တွင်ရှိနေသည့် အရာရှိဟုယူဆရသူ ယူနီဖောင်းဝတ်ဗိုလ်မှူးဆီသို့ ဦးတည်လိုက်၏။ “အစ်မ… ကျွန်မကြောက် တယ်… ဘာသွားလုပ်ဦးမလို့လဲ” ဟု ပြောရင်း ကြောက်လန့်နေသည့် မာလာလည်း မေသက်နှင့် အတူတူ လက်တွဲမဖြုတ်ပဲ တန်းလန်းပါလာ၏။
“ကျွန်မအိမ်က ဒီကုန်းတံတားဆင်းလိုက်တာနဲ့ ဟိုဘက်ငါးမိနစ်ဆို ရောက်ပြီ၊ အိမ်မှာ ကလေးအငယ်ကျန်ခဲ့တော့ ကျွန်မ ပြန်မှဖြစ်မယ်၊ ဒီကုန်းတံတားရဲ့ ဘေးလှေကားကနေ တက်သွားချင်တယ်၊ ခွင့်ပြုပေးပါ”
အသက်၀၀ရှူလိုက်ပြီး မျက်လုံးချင်းရဲရဲရင်ဆိုင်၍ မေသက် စကားကို တစ်လုံးချင်းပြော လိုက်၏။ ရင်တွေ တထိတ်ထိတ်ခုန်နေသည့် မေသက်၏လက်ဖ၀ါးထဲမှာတော့ မာလာလက် ဖ၀ါးလေးက ဇောချွေးတို့ဖြင့် စိုအိလျှက်။
“ ဒါဆို.. မြန်မြန်သွား.. ဟေ့.. သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပေးတက်လိုက်..”
တံတားပေါ်တက်သည့် လှေကားရင်းမှ လက်နှက်ကိုင်လုံခြုံရေးအစောင့်ကို လှမ်း၍ အမိန့်ပေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း မေသက်လည်း လက်တစ်ဘက်က ပိုက်ဆံထုတ်ကို ပိုက်၊ ကျန်လက်တစ်ဘက်က မာလာ့လက်ကိုဆွဲ၍ အုတ်လှေကားလေးအတိုင်း တံတားပေါ် အပြေးတက်ခဲ့၏။
လှေကားအတိုင်း ပြေးတက်ခဲ့သည့် မေသက်တို့ကို ရင်နင့်ဖွယ် မြင်ကွင်းက ဆီးကြိုနေ၏။ အရောင်မတူ၊ ပုံစံမတူ၊ ဘယ်ညာမစုံသည့် ဖိနပ်လေးများက လှေကားတလျှောက် အနှံ့ပျံ့ကျဲလျှက်။ သွေးစသွေးနများက လှေကားထစ် အင်္ဂတေ အခင်းပေါ်မှာ ဟိုသည်တကွက်။ ဤလှေကားထစ်များ၏ကြိုဆိုနေပုံက မေသက်တို့နှစ်ယောက်အတွက် သွေးပျက် ချင်စရာ။ သို့သော် ရွေးချယ်စရာမရှိ။ အိမ်သို့ အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ရန် သည်တစ်လမ်းသာ ရှိ၏။ လှေကားအဆုံး လူသွား လမ်းစင်္ကြံထိပ်အရောက် မေသက်တို့နှစ်ယောက်ကို ဆီးကြိုနေသည်က မလှမပအခြေအနေ။
“ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချ…. ခေါင်းပေါ်လက်တင်ထား…”
မျက်စိထဲ စာအုပ်ထဲဖတ်ထားဖူးသည့် ဂျပန်ခေတ်က ဂျပန်ကင်ပေတိုင်များကို မေသက် ရုတ်ချည်း မြင်ယောင် မိလိုက်၏။ အခုက ဂျပန်မဟုတ်။ မြန်မာအချင်းချင်း။ မြန်မာ အချင်းချင်းမှ စောစောအိမ်ထောင်ကျ၍ စောစော သားသမီး မွေးခဲ့လျှင် ကိုယ့်သားအရွယ်လောက် သာသာဟု မေသက်တွေးမိ၏။ ၀တ်စုံပြည့်နှင့် သူ့လက်ထဲက သေနတ် ထိပ်ဖျားတွင် မတော့ မြိနေသည့် ဘက်နက်နှင့်။
“ ထိုင်ဆို ထိုင်လေ… နားမလည်ဘူးလား…”
မာလာက ကြောက်လန့်ပြီး ဆတ်ခနဲထိုင်ချလိုက်ရာ သူနှင့်လက်တွဲထားသည့် မေသက်လည်း ကြမ်းပေါ် ဖင်ထိုင်ကျသွားတော့၏။ မေသက်အံကို တင်းတင်းကြိတ်လိုက်မိသည်။ စောစောက ဘက်နက်ကိုယ်တော်လေးအား စင်္ကြံဟိုးတစ်ဘက်ဆီမှ အလားတူ ကိုယ်တော်လေး တစ်ယောက် က လှမ်းခေါ်လိုက်သဖြင့် မေသက်တို့ကို ကျောခိုင်းပြီး ခေါ်ရာဘက်သို့ ထွက်သွား၏။ အိမ်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်ရောက်ချင်မှ တံတားပေါ်ချောင်ပိတ်မိနေပြီ။ ပြဿ နာက အကြီးကြီးတက်လေပြီ။ ပုံစံထိုင်ရင်း “ကျွန်မတို့တော့ အဖမ်းခံရပါပြီ” ဆိုပြီး ချုံးပွဲချငိုနေသည့် မာလာ့ခေါင်းပေါ်တင်ထား သည့် ပုံစံလက်ကို မေသက် ဆွဲယူဖြုတ်ချလိုက်မိ၏။
“ထိုင်တာတောင်လွန်လှပြီ၊ နင့်လက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်မထားနဲ့”
မေသက်အသံက နည်းနည်းမာသွားမည်လားမပြောတတ်။ မာလာပင် မျက်လုံးလေး ၀ိုင်းလျှက်က တအိအိ ငိုသံတိတ်သွား၏။ မေသက်တို့က ဘာအတွက်ကြောင့် ပုံစံထိုင်ရမည်နည်း။ ဟုတ်သည်။ မေသက်တို့က စွဲချက်တင်ခံထားရသည့် တရားခံတွေမဟုတ်။ လွတ်လပ် သည့် ပြည်သူတွေ မဟုတ်လား။ မေသက်တို့ကို တရားခံတွေကဲ့သို့ ထိုင်ခိုင်းထားသင့် ပါသလား။ မေသက် တစ်စက္ကန့်လေးမျှပင် မထိုင်နိုင်ပါ။ တလိမ့်လိမ့် ရုန်းကြွတက်လာ သည့် ဒေါသကို ချုပ်ထိမ်းရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေသက် အကဲခတ်လိုက်၏။
မေသက်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် စကြံ င်္တစ်ဘက်စွန်းတွင် လူဦးရေ သုံးလေးဆယ်ခန့် ရှိနေ၏။ ဘက်နက် တရွယ်ရွယ်နှင့် ကိုယ်တော်လေးများ၏ အမိန့်ပေးမှုအောက် ခေါင်းပေါ် လက်တင်၍ ပုံစံထိုင်နေကြရရှာသည့် အရွယ်စုံ ကျား/မများ။ ကြည့်ရသည်မှာ စိတ်မချမ်းသာ လှပေ။ ကုန်းတံတားအလယ်သို့ အကြည့်ရွှေ့လိုက်စဉ် တွေ့ရသည်က တင့်ကားတစ်စီး။ ထိုမျှမက ဒိုင်နာကားနှစ်စီးအပြည့်နှင့်အရပ်ဝတ်များ။ ထိုအရပ်ဝတ်များ၏ ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်နှင့် ထိုသူတို့လက်ထဲက လက်ကိုင်တုတ်များ။ သတင်းတွေထွက်နေသည့် စွမ်းအားရှင်ဆိုသူများ ကို မေသက်တစ်ယောက် မျက်ဝါးဝါးထင်ထင် တွေ့နေရပြီကော။ မေသက်တို့က သေရေး ရှင်းရေးဖြစ်နေချိန် သူတို့က ကုန်းတံတားပေါ်မှာ ရယ်ပွဲဖွဲ့နေနိုင်သေးသည်ကို မြင်ဖြစ်အောင်
မြင်နေရသေးသည်။ ပန်းဆိုးတန်းဘက်တံတားအောက်သို့ အသာထ၍ မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ သံဃာများနှင့် လူအများရှိနေကြဆဲ။
“ မာလာ… နင် ကြောက်မနေနဲ့… ငါ့ပုံစံအတိုင်း အနောက်ကနေ လိုက်ခဲ့၊ ဘာမေးမေး ငါပဲဖြေမယ်၊ ကဲ..စမယ်..”
ပြောပြောဆိုဆို ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရာမှ အခြေအနေကြည့်ရင်း မေသက် ထိုင်လျှက် အနေအထားဖြင့် ခုန်ဆွခုန်ဆွ နောက်သို့ ဖြည်းဖြည်းရွှေ့၏။ ထိုသို့ရွှေ့ရင်း လှေကားထိပ်
ရောက်သော် လာရာလမ်းအတိုင်း ကဆင့်ကလျားရှိနေသော ပိုင်ရှင်မဲ့ဖိနပ်လေးများကို ကျော်ဖြတ် ၍ လှေကားမှ အလျင်အမြန် ပြန်ပြေးဆင်းခဲ့သည်။ မာလာကလည်း မေသက် အနောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လျှက်။ တံတားအောက်ရောက်လျှင် စောစောက မေသက်တို့ကို တံတားပေါ် သွားခွင့်ပြုခဲ့သည့် အရာရှိဆိုသူနှင့် ထပ်မံဆုံရပြန်၏။ သူစကားမစခင် မေသက်ကပင် ဦးအောင်ပြောလိုက်၏။
“ ကျွန်မတို့ကို ပေးမဖြတ်ဘူး၊ အပေါ်မှာ အသွားအလာတွေ အကုန်ပိတ်ထားလို့ ပြန်ဆင်း လာခဲ့တာ ”
“ အဲ့ဒါဆို ခုနထွက်လာတဲ့ လမ်းကြားထဲ ပြန်ဝင်… ”
မေသက် ၀န်းကျင်ကို အမြန် အကဲခတ်လိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမတလျှောက်လုံး အသွားအလာ မရှိတော့။ ယူနီဖောင်းဝတ်လက်နှက်ကိုင်များဖြင့်သာ နေရာအပြည့်ယူထား၏။
“ ဗိုလ်မှူး… ကျွန်မ အဲ့ဒီလမ်းထဲ ပြန်မ၀င်ချင်ဘူး၊ ကျွန်မတို့ ဒီဘက်အခြမ်းကနေ သမ္မတရုံကုန်းအတိုင်း ထွက်သွားချင်တယ်၊ ခွင့်ပြုပေးပါ..၊ အိမ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့လို့ပါ”
“ တွေ့တဲ့အတိုင်း ဒီလမ်းမပေါ် ဘယ်သူ့မှ ဖြတ်သွားခွင့် မပေးတော့ဘူး…၊ ကဲ…ခင်ဗျားတို့ သိပ်အလျဉ်လိုနေလဲ…ပလက်ဖောင်းဘေးအကွယ်ကနေ နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပဲ မြန်မြန်သွက် သွက်ကပ်ပြီးသွား….၊ ပြေးခွင့်မပေးဘူးနော်၊ ပြေးရင် ကိုယ့်ထိုက်ကိုယ့်ကံပဲ..”
စကားလည်းအဆုံး မေသက်နှင့်မာလာနှစ်ယောက် ပလက်ဖောင်းဘေး ရုပ်ရှင်ရုံတန်းဘက်မှ ကပ်ပြီး တချိုးထဲ အမြန်လျှောက်တော့သည်။ လက်နှက်ကိုင်များအား တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖြတ်ကျော်လာချိန်တွင် တစ်ယောက် ယောက်များ လှမ်းတားလိုက်လေမလား၊ သို့တည်းမဟုတ် သေနတ်ဖြင့် နောက်ကျောကနေ လှမ်းပစ်လိုက်လေ မလားဟူသည့် သံသယစိတ်ဖြင့် တုန်လှုပ်နေမိတာအမှန်ပင်။ ကံကောင်းထောက် မစွာ မေသက်နှင့်မာလာ တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက်တွဲလျှက် အပြေးတစ်ပိုင်းဖြင့်လျှောက် လိုက်သည်မှာ သမ္မတရုံကုန်းတံတားအလယ်သို့ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရောက်ခဲ့ချေပြီ။ လမ်းတလျှောက် ရပ်ထားသည့် ကားများဖြင့် ပြည့်နေ၏။ လူတချို့ ကုန်းပေါ်သံဆန်ကာကွက်မှ တဆင့် ရထားသံလမ်းဆီသို့ အသက်အန္တရာယ်ပင် မမှုနိုင်တော့ပဲ တွယ်ဆင်းနေကြ သည်ကို တွေ့ရ၏။ မြို့ပတ်ရထားစီးပြီးပြန်မည့် ခရီးသည်များ ဖြစ်တန်ရာ၏ ဟု မေသက် တွေးမိသည်။ မေသက်နှုတ်မှ အားလုံးဘေးမသီရန်မခဖို့ တရွရွ ဆုတောင်း နေမိ၏။ မာလာကလည်း “အောင်ဆန်းကွင်းဘက်မှာ ဘာအစောင့်အကြပ်မှမရှိပဲ သွားလို့ရပါစေ” ဟု ဆုတောင်းနေ၏။ မာလာစိတ်ပူမည်ဆိုလျှင်လည်း ပူချင်စရာ။ မဟုတ်လျှင် အိမ်ရှိရာ လမ်းဘက်ကို ပတ်ဝင်ရန် လမ်းက အင်မတန်မှ ဝေးသွားလေပြီ။ အောင်ဆန်းကွင်းဘက်သို့ နှစ်ယောက်သား ချိုးကွေ့လိုက်စဉ် လမ်းကြောင်းရှင်းနေသဖြင့် ၀မ်းသာသွားရ၏။
မေသက်တို့နှစ်ယောက် မရှက်နိုင်တော့ပါ။ ထိုအချိန်တွင် မည်သူ့မည်သူမျှလဲ ဂရုစိုက်နိုင်မည် မဟုတ်ကြပါချေ။ မေသက် ထမီကို တိုတိုပြန်ပြင်ဝတ်လိုက်၏။ ပြီးသည်နှင့် အိမ်သို့ တချိုးတည်းပြေးတော့သည်။ မာလာခမျာလည်း ဆာရီ တလွှားလွှားဖြင့်။ ယခုအချိန်မှာ နှစ်ယောက် လုံး၏ ပန်းတိုင်က အိမ်တွင် ကျန်နေခဲ့သူများအတွက်ဖြစ်သဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် ခြင်း တူနေကြသည်။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ မေသက်တို့နှစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ရင်း လမ်းခွဲကြ၏။ အိမ်မှာ ကလေးများက မာလာပြန်အလာကို မျှော်နေကြပေမည်။ ထို့အတူ မေသက်၏အိမ်တွင်လည်း…။
မေသက်တို့အိမ်က ခြောက်ခန်းတွဲခြောက်ထပ် တိုက်ခန်းတွဲဖြစ်သည်။ လူမျိုးပေါင်းစုံနေ သည်ဟု ပြော၍ရသည်။ မြန်မာများသာမက ထားဝယ်၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ တရုပ်၊ ဟိန္ဒူ၊ ခရစ်ယာန်စသည်ဖြင့် အတော်စုံသည်။ အိမ်ရောက်တော့ တိုက်အောက်တွင် အောက်ဆုံးထပ်မှ ဖွားစောကြည်က “ညည်းအဖေခုနတင် အဲ့ဒီဘက် ထွက်သွားတယ်၊ မတွေ့ခဲ့ဘူးလား၊ အဘိုးကြီးက တားမရဆီးမရ၊ မသွားနဲ့ အိမ်ကနေ စောင့်တာမဟုတ်ဖူးဆို ပြောတာ ရအောင်သွားတယ်၊ အခုတော့ သမီးကပြန်ရောက်တော့ လွဲပြီ” ဟု ကရင်အမျိုးသမီးကြီးပီပီ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ပြော၏။ ဖွားစောကြည်ပြောမှ ဇွဲတစ်ယောက် အိမ်မှာ အဘိုးမရှိပဲ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကျန်ခဲ့လေမလဲဟု တွေးမိ၏။ မေသက် လှေကားထစ်များကို မည်သို့ ကျော်လွှားတက်ခဲ့သည်မသိ။ အခန်းရှေ့ရောက်လျှင် အပေါ်ထပ်ခရစ်ယာန်အိမ်မှ သူနာပြုဆရာမကြီး ဒေါ်ကျိန်နီးနှင့် အတူ ဘေးခန်းထားဝယ်အိမ်မှ ကလေးများလဲ မေသက်တို့အခန်း၏၀ရန်တာတွင် ရှိနေ၍ စည်စည်ကားကားဖြစ်နေကြသည်။
“ သားရော… ဇွဲရေ… သား..”
ပြောပြောဆိုဆို လူတွေကြားထဲမှ အခန်းထဲတိုးဝင်လိုက်တော့ ၀ရန်တာရှိခွေးခြေတွင် ထိုင်နေသည့် သားတော်မောင် ဇွဲကို မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် မေသက် တွေ့လိုက်ရ၏။ သားကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်း၊ မျက်ရည်စများ သုတ်ပေးရင်း တစ်လမ်းလုံး အကြောက်တရားတွေကြားက မထွက်ကျခဲ့သည့် မျက်ရည်စက်များ မေသက်၏မျက်ဝန်းမှ စိမ့်ထွက်လာ၏။ ဇွဲက မေသက်မျက်ရည်စက်များကို သူ့လက်ဖ၀ါးသေးသေးလေးဖြင့် သုတ်ပေး၏။
“ အဘိုး အောက်ကိုဆင်းသွားတော့ တစ်ယောက်ထဲ ငိုနေလို့ ချော့ရင်း ၀ိုင်းစောင့်ပေးနေကြတာ…၊ အိမ်တံခါး ကလဲ ဟောင်းလောင်းကြီး ပွင့်နေတော့ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်အချိန် မသမာသူဝင်လာပြီး အန္တရာယ်ပြုသွားရင် ခက်မယ်လေ၊ နေ၀င်ရီတရော အဖြူအမည်းဘာမှ မသဲကွဲချိန် မဟုတ်လား”
ဘေးခန်း ထားဝယ်အိမ်မှ ဦးလေးက ရှင်းပြတော့ မေသက်လည်း ရင်ခွင်ထဲမှ သားကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်စများဖြင့် တစ်ယောက်ချင်းစီကို “ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ” “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟုသာ တွင်တွင် ပြောနေမိတော့၏။
ထိုအချိန် အားလုံး၏အနောက်မှ အိမ်ထဲ ၀င်ရောက်လာသူကို ကြည့်လိုက်တော့ မေသက်၏အဖေ။
မေသက်၏ အဖေခေါ်သံက ရင်ခေါင်းသံပင် ထွက်သွားလေမည်လား မပြောတတ်ပေ။
“ အဖေက ဘာလို့ အိမ်ထဲမှာမနေပဲ ဒီလိုအချိန်မှာ အပြင်ကို ထွက်ရတာလဲ၊ သမီး တစ်လမ်းလုံး အဖေနဲ့ဇွဲအတွက် ဘယ်လောက်များ စိတ်ပူလာရတယ်မှတ်သလဲ..၊ အိမ်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး မနေပဲ ဒီလောက် ပစ်နေခတ်နေချိန် အပြင်ထွက်ရတယ်လို့၊ တစ်ခုခုဆို လူတွေကြားထဲ ဘယ်လိုပြေးမလဲ၊ သမီးတောင် မနည်းပြန်လာရတာ၊ ပြီးတော့ ကလေးတစ်ယောက်ထဲ အိမ်တံခါးကြီး ဖွင့်ထားသွားခဲ့သေးတယ် အဖေရယ်…. တကယ်ပဲ …”
“ အို… အချင်းချင်းတွေပဲ… အားနာစရာမလိုပါဘူး..”
“ စိတ်မချစရာလဲမလိုဘူး.. ဒီတိုက်ထဲ အတူတူနေနေကြသူတွေပဲ… စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့”
“ ခုမှ သိကြတာတွေလဲမဟုတ်ဘူး… အတူတူနေလာတာ နှစ်တွေတောင် ဆွေးနေပြီ၊ အရေးကြုံရင် တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန်ကူညီရမှာပေါ့..”
အားလုံး တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ၀ိုင်းဖြောင်းဖျပြောသဖြင့် မေသက်၏စိတ် တဖြည်းဖြည်း အေးဆေးလာရ၏။
“ အဖေ.. မကျိန်နီးတို့နဲ့ အိမ်ကို အပ်ထားပြီးမှ သွားတာပါ၊ ကားလမ်းတွေလဲ ပိတ်ထားတယ်၊ ပစ်ခတ်သံတွေလဲ ကြားနေရတော့ သမီးအတွက် အဖေစိတ်ပူပြီး လမ်းထိပ်ထွက်ကြည့်မိတာပါကွယ်..”
အဖေ့၏မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်မိတော့ သမီးအပေါ် ဘယ်လောက်စိတ်ပူနေသလဲဆိုသည့် အဖေ့၏အပူမီးကို မေသက် စာနာနားလည်သွားရ၏။ ထိုစဉ် ခင်ပွန်းသည်ထံမှာ ဖုန်းဝင်လာ သဖြင့် စိတ်ပူနေသည့်ခင်ပွန်းသည်အား အိမ်မှာ အားလုံးရှိနေကြောင်း စိတ်အေးအောင်
ပြောပြဖြစ်သည်။ သည်နေ့အတွက် မေသက်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အကူအညီပေးခဲ့ သူများအကြောင်းကိုတော့ ခင်ပွန်းသည် ခရီးကပြန်ရောက်မှ သေသေချာချာ ပြန်ပြောပြ ရဦးမည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သူတို့အားလုံးကို ကျေးဇူးစကား ထပ်မံဆိုချင်သေးသည်။ အနည်းဆုံး မေသက်နှင့်လမ်းတလျှောက် အတူပြန်လာသည့် မာလာကိုပင် ကျေးဇူးတင် ရန် မေသက် မမေ့ပါချေ။ သူ့၏တွန်းအား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကလည်း မေသက်ကို ဦးဆောင်လို စိတ်နှင့်အတူ၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အသိနှင့်သတ္တိကိုပါ မွေးဖွားပေးခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။
နေ၀င်လျှင် အဖေက ဘုရားခန်းထဲတွင် ပြုမြဲအတိုင်း ဆီမီးပူဇော်နေ ၏။ မေသက် တစ်ယောက် ရုံးမှဝန်ထမ်းများ အိမ်ပြန်ရောက်ကြောင်း သတင်းပြန်ပို့သည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လက်ခံနားထောင်နေရသည်။ တစ်ရုံးထဲ နှစ်ရှည်လများ အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ အိမ်ကို ချောချောမောမော ပြန်ရောက်ကြောင်း သိရချိန်မှာတော့ မေသက် စိတ်ထဲ အေးသွားရ၏။
တစ်ခဏနေလျှင် အဖေ့ဆီမှ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းသံက ဘုရားခန်းထဲမှတဆင့် မေသက်တို့ သားအမိရှိနေရာ ဧည့်ခန်းဆီသို့ ပျံ့လွင့်လာ၏။
အန န္တစကြ၀ဠာအန န္တသတ္တ၀ါတို့၊
နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ ”
လမ်းတလျှောက် သံဃာတော်များ၏ မေတ္တသုတ်ရွတ်ဖတ်သံကို မေသက်ကြားနာ ခဲ့ရသည်။ ယခု အဖေ့၏ မေတ္တာပို့သံကလည်း မေသက်၏ရင်ထဲ စိမ့်ဝင်လို့သွားရ၏။ အနှီမေတ္တာပို့သံများကို မေသက်တို့၏အိမ်အတွင်းမှာသာမက မေသက်တို့၏မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၊ထို့ထက်ပို၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ဖြန့်ကျက် ပျံ့နှံ့သွားစေချင်လှ၏။ မေတ္တာတရား၏ အရိပ်အာဝါသသည် အလွန်ကြီးမား၏။ မေတ္တာတရား၏ငြိမ်းချမ်းမှုကို မေသက်တို့ သက်ရှိလူသားတွေသာမက တိရစ္ဆာန်များပင် နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးလိုကြသည် မဟုတ်ပါလော။ သို့သော် မေသက်တို့က စားသုံးယုံသာ စားသုံးတတ်ပြီး တဖန်ပြန်လည်၍ အချင်းချင်း မေတ္တာတုန့်ပြန်ပေးဖို့ရာ ၀န်လေးနေမိ၊ မေ့လျော့နေမိ၊ စာနာစိတ်ကင်းမဲ့မိနေကြသည် ကတော့ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဘာမျှ မခြားနားပါချေ။
အမှန်တွင် မေသက်တို့အားလုံး ကွဲပြားခြားနားခြင်း မရှိ။ အားလုံးအတူတူပင်။ ပခုံးနှစ်ဘက်ကြား ခေါင်းပေါက်ကြသည့်၊ ခံစားတတ်သည့်နှလုံးသားများ၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ် ဦးနှောက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည့် လူသားများပင် မဟုတ်တုံလော။
လူကို လူဟုသာ မေသက် မြင်ချင်လှပါသည်။
This entry was posted in မဂ္ဂဇင်းဝတ္တုရှည်. Bookmark the permalink.
7 Responses to အနန္တစင်္ကြာဝဠာ၊ အနန္တသတ္တ၀ါတို့….
အစ်မ .. ခေါင်းစဉ်မှာလေ .. စကြာဝဠာ ပေါင်းထားတာ .. ဆရာလုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့နော် …
ကျေးဇူးပါ ဆုဝေရေ.. ကျွန်မ ပြန်ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်မှာလိုက်မယ် မြသွေးရေ… ဖတ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါ…
Ma Ei Kme says:
ဖတ်ရတာ သဲထိတ်ရင်ဖိုပါပဲအမရယ် . . .
ဖတ်ရင်းတန်းလန်းမောလည်းမောရ ရင်လည်းနင့်ရပါတယ်အမ။ နေ့ခင်းက တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ဆိုတော့ ခုမှသေချာပြန်ဖတ်ရတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မဝင်းမော်ဦးကို ကယ်ခဲ့တဲ့ (အဲ့တုန်းက House surgeonဆင်းနေတဲ့) ဒေါက်တာဝင်းဇော်က ပြန်ပြောပြတဲ့ ဖြစ်ရပ် နဲ့ အမဝတ္ထုထဲကဖြစ်ရပ် တစ်ရက်ထဲမှာ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအသေးစိတ်သိလိုက်ရတာ တကယ်ခံစားရပါတယ်အမ။
အချင်းချင်း သွေးမြေကျ ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တိုင်းအတွက် ရင့်နင့်လျှက်ပါပဲ အစ်မမြသွေးရေ……
နှစ်တွေကြာပါပြီ အခုထိ အချင်းချင်း ခွပ်ကောင်းနေကြတုန်း
LeaveaReply to ဆုဝေ Cancel reply
ချစ်ခြင်းသည်သာ တစ်ကမ္ဘာဆိုသော်ငြား - 90072 hits
သမီးရဲ့မျက်လုံးလေး - 59778 hits
အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ - 57158 hits
ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေလို့ - 56875 hits
ဧရာဝတီကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်လော့… - 55168 hits